ရေကြောင်း..ကျောင်းဆရာ၏ ပွဲဦးထွက်..တိုက်ပွဲ.. ~ MSU Portal
၂၀၀၀ပြည့်နှစ်မှာ..ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (Department of Marine Administration) ကို..ပြောင်းပါတယ်..။ မူလက..ကြယ်ငါးပွင့်..မှာ..သဘောင်္လိုက်ပါတယ်..။
အဲဒီတုန်းက..DMA က.ကမ်းနားလမ်း.ခြောက်ထပ်ရုံး..အပေါ်ဆုံးထပ်မှာပါ..။ ကမ်းနားဘက်ခြမ်း.အပေါ်ထပ်.တစ်ခုလုံးက..ကျွန်တော်တို့..ဌာနဖြစ်ပါတယ်..။ ရုံးပေါ်ကနေ.ရန်ကုန်..မြစ်ဘက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်ရင်..ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း..၊ ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်နေတဲ့..ပင်လယ်ကူးသဘောင်္တွေနဲ့..ဒလ..ဘက်ခြမ်းကို..လှမ်းမြင်ရပါတယ်..။
DMA မှာ..ဒု-ညွှန်မှူးသာ..ဆိုတာ.. တစ်ခြားဌာနများလို..ခန်းခန်းနားနား.. သိပ်မရှိပါဘူး..။
ရုံးခန်းကလည်း..နည်းတော့..ကျွန်တော့်စီနီယာ..ဒု-ညွှန်မှူး.တစ်ဦးနဲ့.. ရုံးခန်းတစ်ခုထဲမှာ.. ၂ယောက်အတူတူ နေရပါတယ်..။ ဘာ..ကားမှ..လည်းမရပါဘူး..။
ရှေးအစဉ်အဆက်..ညွှန်ချုပ်တဦး..က..ကြောက်တာလား..၊ အမျှော်အမြင်နည်းတာလား..၊ ပဏာယူတာလား..၊ တစ်ခုခုကြောင့်. .ရုံးအတွက်..အရာရှိကြီးများအတွက်..မဆလ..ခေတ်က..မာဇဒါဂျစ်များ.အထက်က... ချပေးတာကို..၊ ဒီက..လူတွေက..သဘောင်္ဘက်က..လာကြတာ..ကိုယ်ပိုင်ကားများ..စီးနိုင်ကြတယ်..ဆိုပြီး..၊မယူဘူး..ငြင်းခဲ့တယ်..အဲဒါကြောင့်..ကားရှားတာ..လို့လည်း..ပြောပြတာကို. .ကြားဘူး..ပါတယ်..။ ဟုတ်မဟုတ်တော့..မသိပါ.ဘူး...။ ဒီတော့..ကိုယ့်ရှိတဲ့..ပါဗလစ်ကာ..ကားလေးနဲ့..ရုံးတက်ရပါတယ်..။ ကားပျက်တဲ့အခါ..ဘတ်စ်ကားစီးပါတယ်..။
အဲ..ပြောရဦးမယ်..။ ကားမပေးသလို..။ ဆီလည်း..မပေးပါဘူး..။ အိတ်စိုက်..ပါ..။ ခပ်တည်တည်နဲ့..အောင့်သက်သက်နဲ့..ရုံးတက်နေရတာပါ..။
အဲဒီအချိန်တွေမှာ..STCW95 အရ..ဖွင့်ရတဲ့..EER (Efficient Engine Room Rating) သင်တန်းက..အရှိန်ရ ကာ စပါ..။ မူလက..လူနည်းတော့..ရုံးရှေ့ဘက် စင်္ကြန်လမ်း..အပြင်မှာ..ရှိတဲ့..လေသာဆောင်..မှာ..အမိုးမိုး.. အကာကာပြီး..၊ အဖီလေး..ဆွဲပြီး..သင်တန်းဖွင့်ပါတယ်..။ ဌာနက..ဆရာတွေ..မအားကြတဲ့..အခါ..သဘောင်္ပြန်လာတဲ့..ရင်းနှီးတဲ့..အင်ဂျင်နီယာများကို..စာသင်ခိုင်းပါ တယ်..ကျွန်တော်လည်း..DMA မရောက်ခင်ကထည်းက..အဲဒီသင်တန်းမှာ.. နှစ်ချိန်.. သုံးချိန်လောက်.. ၀င်ဘူးပါတယ်..။
နောက်ပိုင်း..လူသစ်တွေကော..သဘောင်္ပြန်လာတဲ့..လူဟောင်းတွေပါ..အဲဒီသင်တန်းကို..တက်မဲ့သူများ လာ တော့.. နေရာမဆန့်တော့ပါဘူး..။ အဲဒီမှာ..နေရာရွေ့ရဘို့..အကြောင်းဖြစ်လာပါတယ်..။
ကျွန်တော့်ဆရာ…ဆရာဦးဌေးအောင် (ပါမောက္ခငြိမ်း) ကလည်း.. အဲဒီအချိန်မှာ..ဒုညွှန်မှူးပါ..။ ဆရာခေါ်လို့.. ကျွန်တော်က..DMA ..ရောက်လာရတာပါ..။
ဖြစ်ပုံက..ဒီလို..၊ ကျွန်တော်က..သဘောင်္မလိုက်ချင်၊ ကျောင်းဆရာ..ပိုးလေးကလည်း..ရှိ..၊ ဆိုတော့.. ရေကြောင်းသိပ္ပံ (အခု..မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်) ကို..ကျောင်းဆရာ..ကထိက.. အနေနဲ့. .ပြောင်းဘို့လုပ်ပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့..ရေကြောင်းကောလိပ်က..တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက.. အင်တင်တင်.. ဖြစ်နေ တော့..၊ ပြောင်းဘို့.က..ခက်နေပါတယ်..။ အဲဒီသတင်းကြားတဲ့..ဆရာက..၀င်းအောင်..ငါတို့ဆီ..လာမလား..ဆိုပြီး..ခေါ်လို့. .ထောက်ခံချက်ပေးလို့..၊ DMA ကို..မျက်စိလည်.ပြီး.မရည်ရွယ်ဘဲ. .ရောက်သွားခဲ့ရတာပါ..။
ဒေါပုံသဘောင်္ကျင်းထဲရွှေ့ရမယ်..။ အဲဒီရွှေ့ရင်..ငါလည်း..တာဝန်ယူဘို့..မလွယ်ဘူး..။ ခြောက်ထပ်ရုံးနဲ့..ဒေါပုံ.. ပြေးနေဘို့က..စာမေးပွဲကိစ္စတွေနဲ့..ငါ့မှာ..မအားဘူး..။ အဲဒီတော့..မင်းတာဝန်ယူနိုင်မလား..တဲ့..။
ရပါတယ်..ဆရာ..ဆိုပြီး..၊ သင်တန်းဖွင့်မဲ့..ဒေါပုံသဘောင်္ကျင်းထဲက..စတို..ဂိုဒေါင်ဟောင်းတွေ..ဆီကို..။ ကျွန်တော်..ရောက်သွားပါတယ်..။
အဆောက်အဦးထဲမှာ..ခိုတွေအပြည့်..ခိုချေးတွေ.က.လည်း.အပြည့်..၊.အောက်ခြေ..ကွန်ကရိခင်းထားတာကလည်း..အပေါက်တွေ..ချိုင့်တွေနဲ့...တင်းကြမ်း..ပါ..။ အဆောက်အဦးအမြင့်..တ၀က်က..အုတ်ပတ်ထားပေမဲ့..အပေါ်ပိုင်း..သုံးပုံ..နှစ်ပုံလောက်က..သံပြားပေါက်..တွေနဲ့..ကာထားတာပါ..။ ၀ိုင်ယာကြိုးတွေနဲ့..မီးခလုပ်တွေကလည်း..တိုးလို့..တန်းလန်း..။
ဟေ့ကောင်..၀င်းအောင်..ဘာဘတ်ဂျက်မှ..မရှိဘူး.၊ အဲဒီသင်တန်းဖွင့်ရမယ်..ဆိုတဲ့..အမိန့်ဘဲ..လာတာ..၊ ဘတ်ဂျက်ပါမလာဘူး..။ ငါ..ကျောင်းသားတွေဆီက..အလှူခံထားတဲ့..ငွေ..နည်းနည်းပါးပါးရှိတယ်..။ အဲဒါ.မင်းကို...ငါပေးမယ်..။ မလောက်ရင်ကော..ဆရာ..ဆိုတော့..၊ မင်းဘာသာ..ကြည့်လုပ်လိုက်ကွာ..တဲ့..။
သဘောင်္ကျင်းက..၀န်ထမ်းတွေ..ခေါ်ပြီး..အဆောက်အဦးကို..သန့်ရှင်းရေး..လုပ်ရပါတယ်..။ ရှိတာလေးနဲ့. ခိုနေတဲ့..ခိုထိုင်တဲ့..နေရာကနေ…လူနေလို့..လူထိုင်လို့..ရမဲ့..နေရာလေးဖြစ်အောင်..၊ စနေ.ရော...တနင်္ဂနွေပါ.. သွားလုပ်ပါတယ်..။
ကူညီသူတွေက.. ၀န်ထမ်းတွေ..ဆိုတော့..စားဝတ်နေရေး..မပြေလည်ကြပါဘူး..၊ ဒီတော့..ကိုယ့်အိပ်ထဲကနေ..လ္ဘက်ရည်ဘိုး..ပေးရပါတယ်..။ ကျွန်တော်ကလည်း..ပိုးက..ရှိတော့..အိတ်ထဲက..ထွက်ပေမဲ့..ပျော်ပါတယ်..။
ဒါပေမဲ့..ပြဿနာက..ထပ်တက်ပါတယ်..။ ခြောက်ထပ်ရုံးက..ခုံတွေ..ရွှေ့တော့..ခုံက..၂၀-၃၀ ဘဲရှိပါတယ်..။ ဖွင့်ရမှာ လူ ၆၀နဲ့ ၈၀ကြား..ပါ..။ စာရေးလက်တန်းပါတဲ့…ကျွန်းထိုင်ခုံတစ်လုံးကလည်း..ထောင်..ဂဏန်းပါ..။ ကျွန်တော့် သင်တန်းဖွင့်ဘို့ကိစ္စ..ကို..ကူသူက..ကိုတင်ထွဋ်ပါ.. အခုတော့..SECDမှာ..ရုံးအုပ်ကြီးပါ..။ အဲဒီအချိန်ကတော့..အထက်တန်းစာရေး..ထင်ရဲ့..။ သူက..သာကေတ..သား..။
ကိုတင်ထွဋ်ရေ..ဘယ်လို..လုပ်ကြမလဲ..ဆို..တော့..သူက..အကြံပေးပါတယ်..။ ဆရာ..ကျွန်တော့်အသိ..ပရိဘောဂဆိုင်..သာကေတ..ထဲမှာရှိတယ်..။ ဆရာ..စရံတစ်ချို့ပေးထားရင်တော့.. ကျွန်တော်..ပြောကြည့်မယ်တဲ့..။
ဒါနဲ့..အစိုးရဘတ်ဂျတ်မရနိုင်မှန်းသိပြီးသားဆိုတော့..အိမ်တွင်းဘဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာနကို.အကျိုးအကြောင်း ပြောပြီး. ဘတ်ဂျတ်တင်ရပါတယ်..။ နောက်..၃-၄..လဆို..ပြန်ပေးပါ့မယ်..ဆိုပြီး..။
ပရိဘောဂဆိုင်ကိုလည်း..အရစ်ကျပေးသွားပါ့မယ်..။ ပိုက်ဆံ..မဆုံးစေရပါဘူး..။ လိုတဲ့..ခုံ..တွေ..လုပ်ပေးပါလို့..ညှိနှိုင်းပြီး..မှာ လိုက်ပါတယ်..။ ဆိုင်ရှင်ကလည်း..ကိုထင်ထွဋ်နဲ့..ရင်းနှီးတော့. ကူညီရှာပါတယ်..။
ခင်ဗျားတို့ကို..ဂတိ.တစ်ခုတော့..ပေးနိုင်ပါတယ်..။ ဒီအလှူငွေထဲက..ကျွန်တော်..တစ်ပြားတစ်ချပ်..မသုံးပါဘူး..။ နောင်..ဒီသင်တန်းတက်မဲ့..လူငယ်တွေ..ခင်ဗျားတို့ရဲ့..ညီတွေ..တူတွေ..အတွက်.ပိုကောင်းတဲ့..စာသင်ခန်းလေး ဖြစ်အောင်..ကျွန်တော်..လုပ်မှာပါ..။ ဘယ်လောက်လှူရမယ်လို့..မပြောပါဘူး..၊ နိုင်သလောက်လှူပါ..။ စာရင်းအင်းနဲ့ထားပါ့မယ်..။ ကြိုက်တဲ့..အချိန်စာရင်းလာစစ်ပါ..။
နောက်တစ်ခုက..ဒီအလှူခံခြင်းဟာ..ဌာနက.ခိုင်းတာမဟုတ်ပါ..။ ကျွန်တော်က.ကျွန်တော့်သဘောနဲ့.. .သက်သက်အလှူခံတာဖြစ်တဲ့ အတွက်...တိုင်လိုလျှင်လဲ..ကျွန်တော့်ကို..သာနံမည်တပ်..တိုင်ကြ..ပါ..။
မျှော်လင့်တာထက်..အလှူငွေ..ရပါတယ်..။ တစ်ချို့..ဖစ်တာဟောင်းကြီးများက..ငါးထောင်အထိ..လှူပါတယ်..။ လွန်ခဲ့တဲ့..ဆယ်နှစ်ကျော်က..ငါးထောင်ဆိုတာ..နည်းမှတ်လို့..။ တစ်ချို့..လူသစ်..ကလေးတွေကလည်း..ငါးဆယ်.တစ်ရာ..နိုင်သလောက်လှူကြပါသေးတယ်..။ အလှူငွေတွေ..ရေတွက်ရင်း..ကိုတင်ထွဋ်နဲ့..ကျွန်တော့်မှာ..ပြုံးလို့..၊ ပရိဘောဂဆိုင်ကို..အကြွေးဆပ်နိုင်မှာ..မို့လေ..။
အောင်ဆန်းကွင်း.နားက...ဂန္ဓမာ..မှာ..Overhead Projector တွေဝယ်..၊ Speaker တွေဝယ်..၊ Micro phone တွေဝယ်..၊ ဆရာတွေထိုင်ဘို့..ခုံတွေ..၊ စာရွက်စာတန်းသိမ်းဘို့..ဘီရိုတွေ..၊ စသည်..စသည်..၀ယ်ရာကနေ.. နောက်ဆုံး
မီးပျက်ရင်တောင်..Projector နဲ့သင်လို့ရအောင်..Honda မီးစက်လေး..တောင်..၀ယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်..။ အတိုင်လည်း..မခံရဘဲနဲ့..ခေတ်..မမှီတမှီ..စာသင်ခန်းလေး..တစ်ခန်း၊